Qalalaasaha Ka Taagan Dhofinta Adhiga | Somaliland.Org
Qalalaasaha Ka Taagan Dhofinta Adhiga
July 28, 2008	QALALAASAHA KA OOGAN DHOOFINTA XOOLAHA.S/LAND
Sida aan cidna ka dahsoonayn Xoolaha Nooli waa lafdhabarta dhaqaalaha Somaliland,waana Meheradda ay dheeftooda ku tiirsan tahay Bulshaddu,Miyi iyo magaaloba.
Waa meheradda ay ka soo hoyan lahayd cashuur dalka anfacdaa haddii ay jiri lahayd Xukumad xalaal ahi.
Ganacsatada Xoolaha nooli waa lafdhabarta dhaqaalaha ,waana kuwa u soo xareeya dalka lacagta Adag,isla markaas waa Meharada ugu shaqalaha badan. Taasi awgeed,waxaa ay Xukumadda xaq ugu leeyihiin badhitaarid iyo qadarin si ay u gutaan hawsha muhiimka ah ee ay ummadda u hayaan balse in abaal looga dhiigo Cago-jugalayn,Xadhig iyo cadaadinn waa xad-gudub cadaaladda ka fog,danta dalkuna aanay ku jirin.
Hadaba, maxaa keenay muranka Xukumadda iyo Ganacsatada xoolaha ee ka aloosan Dalka S/land.?
1-Ninka Carbeed ee Aljaabiri iyo Madaxtooyada oo heshiis-hoosaad u gaar ah oo aan ummada dann u ahayn wadaagay.
2-Neefka ka dhoofa Dekeda Berbera marka uu Dekeda Jedah gaadho waxaa uu ku gadmaa qiime dheerad ah oo uu huwan yahay Magaca soo jireenka ah ee Berberaawi. Isla magacii berberaawi waxa Xukumadda S/land ka iibisay Dalka Jabouti oo ku gatay qiime aad u sareeya,waayo,Jabouti waxay ay muddo dheer raadco ugu jirtay sidii Xoolaha soomaliland uga dhoofi lahaayeen Dekedooda iyaka oo sita cadaymo ah in Xoolahu yihiin Jaboutian.
Waxaa iyana nasiib darro iyo qaran-jab ah in Ticknicaddii dalka ee Cadawga loogu talo galay in ay gaaf-wareegayso Dekeda berbera si ay u horjoogsadaan Xoolaha ay dhoofi lahaayeen Muwaadiniintii Somaliland.
Runtii Soomaliland waxa soo wajahay xaaladd qalafsan oo haddii aan xal degdeg ah loo helin horseedi karta burbur aan laga soo kaman doonin. Waxaana loo bahaan yahay in ay si wada jir ah gurmad midaysan u galaan Golaha Xildhibaanada,3Xisbi qaran iyo Waxgaradka Dalku,lana xisaabtamaan Xukumada si xaaladdan murugsan xal waara oo daneed loogu helo.
Mohamed Adan Omer